छोराछोरी होइन, अभिभावक बदलिनुपर्छ | Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
छोराछोरी होइन, अभिभावक बदलिनुपर्छ
- आचार्य लक्ष्मण भण्डारी
२०७६ कार्तिक ५, मंगलवार ११:१६ गते
अभिभावक भएर जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु सामान्य काम होइन । संसारको सबैभन्दा कठिनतम काममध्ये एउटा काम छोराछोरी हुर्काउनुु, बढाउनु, पढाउनु र तिनलाई स्थापित गर्नु हो । व्यक्तिले तनाव व्यहोर्नुपर्ने, चिन्तित हुनुपर्ने, अन्तस्करणदेखि नै दिल खोलेर खुसी हुन नसक्ने कारणमध्ये सन्तान र तीसित सम्बन्धित विषयहरु सबैभन्दा पहिला आउँछन् । छोराछोरीलाई जन्माउने योजना बनाउनासाथ व्यक्तिले जिम्मेवारीको भारी बोक्न सुरू गर्दछ र जीवन रहेसम्म कुनै न कुनै बहानामा सन्तानप्रतिको उत्तरदायित्वबोध गरिरहन्छ ।
बाबुआमा बनेर आफ्नो धर्म निर्वाह गरिरहँदा झेल्नुपर्ने दुःखकष्टका त कुरै नगरौँ, कति छन् कति । आफ्ना समस्त रूचि, इच्छा र मनोभावनालाई यिनै सन्तानको खुसी र प्रसन्नताभित्र कैद गर्नु तमाम अभिभावकको नियति हो । कहिलेकाहीँ हरेक अभिभावकलाई लाग्छ– यी छोराछोरी नभएका भए कति स्वतन्त्र भएर रमाउन सकिँदो हो, मनका रहर पूरा गर्न सकिँदो हो र आफ्नो करिअरलाई माथि उठाउन सकिँदो हो ! छोराछोरीका लागि रातदिन एकोहोरो खट्नुपर्दा इच्छाहरुलाई सहिद बनाउनुपर्दाको अभिव्यक्ति हो यो ।
थुपै्रथुप्रै अप्ठ्यारा र दुःखहरुको अनुभूति व्यहोर्दै निर्वाह गर्नुपर्ने त्यस्तो असामान्य जिम्मेवारीको नाम नै ‘अभिभावक हुनु’ हो । त्यसोभए सामान्यतः छोराछोरीप्रतिको जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहँदा वा तिनको पालनपोषण र शिक्षादीक्षामा लागिरहँदा अभिभावकले व्यहोर्नुपर्ने दुःख र हन्डरहरु केकस्ता हुने गर्दछन् ? आउनुस्, अब ती विषयहरुमा चर्चा गरौँ ।
बालबालिकासित काम गर्दा देखा पर्ने एउटा प्रमुख समस्या ‘पुस्तान्तरण’ अर्थात् जेनेरेसन ग्याप हो । हामी र हाम्रा छोराछोरीका बीचमा कम्तीमा पनि २० वर्षको फरक हुने गर्दछ । आज जुन सामाजिक अभ्यास छ, परिवेश र अवस्था छ, २० वर्षपछि त्यही रहँदैन । हामीले आज जस्तो भोगेका छौँ, २० वर्षपछि जन्मिने हाम्रा छोराछोरीले त्यही भोग्दैनन् । तिनको सोच, विचार र सामाजिक अभ्यास फरक हुन्छ, हाम्रो फरक हुन्छ । घरमा बाबुआमा र छोराछोरीका बीचमा देखा पर्ने यही व्यावहारिक समस्यालाई नै पुस्तान्तरण अर्थात् जेनेरेसन ग्याप भनिन्छ ।
दुवै पक्षका कुरा भिन्न हुन्छन्, विचार भिन्न हुन्छन्, शैली र सोच भिन्न हुन्छन् । भिन्नता हुँदैमा समस्या त नहुनुपर्ने हो । तर, दुवै पक्षले आआफ्नै भोग, विचार र सोच ठूलो हो र यसैअनुसार हुनुपर्दछ भनेर ढिपी गर्दा नै समस्या देखा पर्ने हो । ‘छोराछोरीले आफ्नै समयका कुराबाहेक अरु केही सुन्न नचाहने र बाबुआमाले पनि आफ्नै समयका कुरा छोराछोरीले मान्नुपर्ने’ हठका कारण घरमा बाबुआमा र सन्तानबीच द्वन्द्व बढ्ने गर्दछ र त्यसका कारण अभिभावक दुःखी हुनुपर्ने अवस्था आउँछ । अभिभावक दुःखी हुनु भनेको बालबालिका सुखी हुनु पक्कै होइन । त्यसको असर त पूरै घरमा पर्छ ।
यस्तो अवस्थामा के गर्ने त ? दुवैले एकअर्काका विचार र भावनाको कदर गर्ने । सुरूआत कसले गर्ने त ? सुरूआत बाबुआमाले गर्ने । किन गर्ने बाबुआमाले ? किनकि बाबुआमा ठूला हुन्छन्, जिम्मेवार हुन्छन् र ठीकबेठीक छु्ट्टयाउन सक्ने हुन्छन्, त्यसैले ।
निश्चय पनि हामीले व्यहोरेका अनुभव, बिताएको समय, संस्कार र जीवनशैली हाम्रालागि विशिष्ट हो । यसको धेरै प्रभाव हाम्रा छोराछोरीमा अवश्य परेकै हुन्छ किनकि छोराछोरी बाबुआमाकै अनुकरण हुन् । तर, तिनले पनि त आफ्नो समय भोगेका हुनाले अलि ठूला भएपछि त्यो भोगाइको प्रभाव व्यवहार, सोच र जीवनशैलीमा अवश्य पर्दछ । यस्तो अवस्थामा अभिभावकले ‘मैले पनि मेरा अभिभावकका विचारसित धेरै कुरामा सम्मति राखे पनि कतिपय कुरामा विमति राखेको थिएँ, मेरो समयको सम्बोधन गरेको थिएँ’ भन्ने ठानेर सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ, समस्या बढाउने होइन ।
छोराछोरी त साना हुन्छन् । ती जति ठूला भए पनि अभिभावकका अगाडि सानै हुन् । तिनले ढिपी गर्नु स्वाभाविक हो । हामीले ढिपी गरेर हुँदैन । तिनलाई प्रेमले सम्झाउने हो । कतिपय कुरामा हामीले भनेजस्तो गरेनन् भने पनि केही छैन किनकि धेरै कुरा तिनले केही नभने पनि हामीले गरेकै कुरा गरेका छन् । तसर्थ, पुस्तान्तरणका कारण उत्पन्न दुःखकष्टलाई कम गर्न अभिभावकले आपैmँ कम्मर कस्नुपर्ने हुन्छ । बाबुआमा जहिले पनि पुराना हुन्छन् भने छोराछोरी सधैँ नयाँ । संसारमा नयाँ कुरा बदलिएर पुरानो कहिल्यै भएको छैन, बरू पुरानो बदलिएर नयाँ हुने हो । तसर्थ, छोराछोरीलाई बदल्ने हठ हरेक अभिभावकले छोडिदिनु नै उत्तम हुन्छ । छोराछोरीको समय र वरपरको बदलिँदो परिवेशअनुसार आपूm पनि बदलिन तयार हुनुपर्दछ । यसोगर्दा समस्या समाधान हुन्छ र घरमा सुखद वातावरण पैदा हुन्छ ।
खर्चपर्च र अर्थव्यवस्था
बालबालिकालाई पढाउने, लेखाउने, हुर्काउने कुरा त्यसै सम्भव हुँदैन, पैसा चाहियो, सम्पत्ति र खर्चपर्च चाहियो । समाज प्रतिस्पर्धात्मक हुँदै गएको छ । यस्तो अवस्थामा छोराछोरीलाई पनि त्यसैअनुसारको खर्च जोहो गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो खर्च र अर्थको व्यवस्था कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा अभिभावकमा दुःख र चिन्ता देखा पर्दछ ।
जागिर नहुन सक्छ, जमिन—जायजेथा नहुन सक्छ र बलियो आर्थिक स्रोत नहुन सक्छ । यसका कारण अभिभावकले छोराछोरीका आवश्यकताहरुलाई उचित ढङ्गले सम्बोधन गर्न नसक्ने स्थिति आउँछ । त्यतिबेला अभिभावकलाई ग्लानिबोध, हीनताभास र दुःखको अनुभव हुन्छ । बाबुआमाको अवस्था बुझेर व्यर्थ आवश्यकताका कुरा नगर्ने छोराछोरी फेरि एकदमै कम हुन्छन् । उमेरले सानै भएका र गहिरो समझको विकास नभइसकेका हुँदा तिनले बाबुआमाका दुःख र अप्ठ्यारा बुझ्न पनि सक्दैनन् र नचाहिने ढिपी गर्छन् ।
त्यो अवस्थाले अभिभावकलाई सारै पीडित बनाउँछ । छिमेकीका छोराछोरीका उज्याला अनुहार र उत्साहित आफ्ना बालबालिकाको तुलना गर्दा देखा पर्ने अभावले पिरोल्छ । बाबुआमाको कमजोर अर्थव्यवस्थाका कारण छोराछोरीले पनि सम्मान नगर्ने स्थिति आउन सक्छ ।
तर, यतिबेला पनि अभिभावक आत्तिनुहुँदैन । आत्तिएपछि त अभिभावक नै भइएन नि ! अभिभावक भनेकै हरेक अवस्थामा पनि शान्त, स्थिर र प्रसन्न भएर अगाडि बढ्ने पात्रको पहिचान हो । यस्तो अवस्थामा आफ्नो क्षमताभन्दा ठूलो कुरा गर्न अग्रसर हुनुहुँदैन ।
छोराछोरीलाई घरको अवस्था सबैको एकनास नहुने, हातका औँला पनि सबै बराबर नहुने, सबै धनी नहुने, धनीलाई पनि कुनै न कुनै कुराको आवश्यकता परिरहने भएकाले हाम्रो अवस्था पनि अरुको जस्तै सामान्य हो भनेर परामर्श गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि निजी आवासीय विद्यालयमा पढ्ने अवस्था छैन भने सरकारी विद्यालय पढ्न तयार गराउनुपर्ने हुन्छ । व्यर्थ प्रतिस्पर्धाबाट सधैँ बच्नुपर्दछ ।
यदि आर्थिक अवस्था कमजोर छ भने बलियो बनाउनतिर लाग्नुपर्दछ, तर पैसा र सम्पत्तिकै कारण छोराछोरी पाल्न सकिने भएन भनेर चिन्ता लिनुको कुनै अर्थ छैन । यस्तो अवस्था आयो भने वरपरका चराचुरूङ्गीलाई हेरेर चित्त बुझाउनुपर्ने हुन्छ । ती पक्षीहरुको कुनै जागिर छैन, जग्गाजमिन छैन, भरे खाए भोलि के खाने भन्ने स्थिति छ । त्यस्तो अवस्थामा पनि ती आत्तिएका छैनन् । तिनका सन्तान कत्ति दुःखी छैनन् । त्यसैले, अभावलाई पूरा गर्ने प्रयास गर्नमा कुनै कन्जुस्याइँ गर्न हुँदैन, तर दुःखी भएर पनि हुँदैन । आफ्नो अवस्थानुसार बालबालिकालाई मानसिकरुपमा तयार पार्नुपर्दछ र आफू पनि तयार हुनुपर्दछ ।
बाहिर जाँदा सबैले सम्मान गर्छन् । अफिसमा सबै कर्मचारीले नमस्कार गर्छन् । गल्ती गरे भने डराउँछन् । बाहिर पनि सबै झुक्छन्, तर घरमा आउँदा ४ वर्ष, ५ वर्षका छोराछोरीले टेर्दैनन्, भनेको मान्दैनन्, उल्टै मुखमुखै लाएर बाझ्छन् । के–के कुरा गरेर गिज्याउँछन् । यस्तो अवस्थामा बाबुआमालाई सारै रिस उठ्छ । ‘यसले मलाई हेप्यो अथवा हेपी’ भन्ने भाव पैदा हुन्छ । आफ्नै छोराछोरीले यसरी हेपेर कुरा गर्दा आफू निकै अपमानित भएको अनुभूति हुन्छ, अभिभावकलाई ।
त्यति मात्रै हो र भन्या ! कुनै कुनै केटाकेटीले त बाबुआमालाई नै ‘तँतँ’ र ‘मम’ भनेर झगडा गर्न तम्सिएका उदाहरण पनि प्रशस्त देखिएका छन् । घरमा कति काम हुन्छन् । छोराछोरी भएपछि कहिलेकाहीँ काममा सघाइदिए पनि हुन्थ्यो भन्ने आशा हुन्छ । ‘बाबुु, यो काम गरिदेऊ । यसो गर्न प¥यो । नानू, यसो गर’ भनेर भन्दा ‘नाइँ, गर्दिनँ, सक्दिनँ’ भन्ने छोराछोरीको जवाफले बाबुआमालाई गहिरो चोट पुग्छ । ‘मैले यति माया गरेर हुर्काएका, दुःख गरेका, सर्वस्व दिएर माया गरेका आफ्नै छोराछोरीले मैले भनेको मानेनन्’ भन्ने अनुभूति बाबुआमालाई हुने गर्दछ । यो अभिभावकले सहन गाह्रो हुने अर्को दुःख हो ।
यस्तो समयमा पनि हामीले चित्त बुझाउनुपर्ने हुन्छ । आखिर छोराछोरी सबैका करिब–करिब यस्तै हुन् । पहिलो, हामीले सबै ठाउँमा उस्तै खालको सम्मान खोजेर पाउँदैनौँ, खोज्न पनि हुँदैन । ‘घर देखे कुकुर बलियो’ भन्ने उखानै छ । सबै व्यक्ति घरमा सिंह बन्छ, राजा बन्छ । छोराछोरीलाई हामीले त्यस्तै मायालु वातावरणमा नै हुर्काएका हुन्छौँ ।
कुनै कुनै अभिभावकका बालबालिका मात्रै कम बोल्ने, भनेको तुरून्त मान्ने, आज्ञा–आदेश फटाफट पालन गर्ने प्रकारका हुन्छन् । नत्र अधिकांश बालबालिका घरमा अल्छी गर्ने, सकेसम्म काम गर्न नपरे हुन्थ्यो, भनेको मान्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने चाहन्छन् । यो आम केटाकेटीको स्वभाव नै हो । बाबुआमाले यसलाई त्यति धेरै गहिराइका साथ लिनुहुँदैन । ‘तँतँ र मम’ नै गर्न थाले भनेचाहिँ विचार गर्नुपर्ने हुन्छ, अन्यथा कहिलेकाहीँ अटेरी गर्ने अथवा भनेको नमान्ने स्थितिका कारण त्यस्तो धेरै चिन्ता लिनुपर्ने कुनै कारण छैन । ‘छोराछोरीले मैले भनेको मान्नैपर्छ । नमानेको अवस्थामा म तल पर्छु, म हेपिन्छु, मेरो कुनै अस्तित्व नै रहँदैन’ भन्ने ढङ्गले नसोचौँ । यस्तो भावना भएन भने केही फरक पर्दैन ।